Easter Festivities In Europe You Can't Miss | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့အီစတာပွဲတော်သင်မပျက်မကွက်မရပါ
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 02/05/2020)
ဥရောပတိုက်တွင်အီစတာပွဲတော်ကနေကွဲပြား တိုင်းပြည်နိုင်ငံတစ်ခု နှင့်မြို့ကနေမြို့မှ. ဒါဟာအထင်ရှားဆုံးတဦးနှင့်အသက်အကြီးဆုံးင် ပွဲတော်များ ၏ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်. အီစတာသင်္ချိုင်းတော်မှယေရှုခရစ်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏အခမ်းအနားဖြစ်ပါသည်.
အီစတာများအတွက်အခမ်းအနားရက်စွဲကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြောင်းလဲ. ဒါဟာပုံမှန်အားနွေဦး equinox အောက်ပါအပြည့်အဝလအကြာတွင်ပထမဦးဆုံးတနင်္ဂနွေကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်. ဒါဟာနှစ်စဉ်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ဖြစ်ပေါ်, နှောင်းပိုင်းတွင်ကနေအထိ မတ်လ နှောင်းပိုင်းတွင်ရန် ဧပြီလ.
ခရစ်ယာန်ဘာသာအတွက်, သန့်ရှင်းသောဘုရားအပတ်အီစတာမတိုင်မီတစ်ပတ်ဖြစ်ပါသည်နဲ့ Palm တနင်္ဂနွေလည်းပါဝင်သည်, Maundy ကြာသပတေးနေ့, ကောင်းသောသောကြာနေ့နှင့်သန့်ရှင်းသောစနေနေ့. ဥရောပမှာ, နိုင်ငံအများအပြားတစ်ခါတစ်ရံတွင်ယုဒရှမီးကိုခေါ်ကြသည်ကြီးမားသောမီးလောင်မှုမီးအားဖြင့်အီစတာဆင်နွှဲ. အစပိုင်းတွင်, ဤအမီးရှိုနွေဦး၏ဆိုက်ရောက်ဆင်နွှဲဖို့ရည်ရွယ်. ဤတွင်သင်အကြိုက်ဆုံးဥရောပနိုင်ငံများတွင်အချို့အီစတာကျင်းပပုံကိုတစ်ဦးအမြန်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်.
တွင် ဟော်လန်, အီစတာများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများမတိုင်မီဥပုသ်တစ်ရက်စတင်. ဤသည်နေ့ရက်သည် "Vastenavond" သို့မဟုတ်မြန်ဧဝကိုအဖြစ်လူသိများသည်. ဤအချိန်အတောအတွင်း, အဆိုပါနယ်သာလန်သူတို့ရဲ့ပွဲတော်၌မဆက်ဆံနှင့်ရန်ဆန္ဒရှိသူကိုနိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်များ၏အထင်ရှားဆုံးမြင့်တက်အတော်ပင်.
ပြည်သူ့မကြာခဏပွဲလမ်းသဘင်နှင့်အတူအတိုင်းလိုက်နာထားတဲ့အီစတာန်ဆောင်မှုများအတွက်ဘုရားကျောင်းတက်ရောက်ရန် အစားအသောက်. ကလေးတွေ တောက်ပအလှဆင်၏ search အတွက်ကြက်ဥ Hunt သွား ပြုတ်ကြက်ဥ သို့မဟုတ်ချောကလက်ကြက်ဥ. ပိုင်ရှင် Tikken လူတွေကြက်ဥအတူတူခေါက်သောအကြိုက်ဆုံးအီစတာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဂိမ်း၏ရည်မှန်းချက်ဥစ္စာကိုချိုးဖောက်မရှိဘဲအခြားလူတစ်ဦး၏ကြက်ဥ crack ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
Breda ရထားမှ Antwerp
Utrecht ရထားမှ Antwerp
ပြင်သစ်အထူးဘုရားကျောင်းဝန်ဆောင်မှုတက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်အီစတာဆင်နွှဲ, တစ်ဦးပွဲလမ်းသဘင်မုန့်ညက်, တစ်ခုနှင့်အီစတာကြက်ဥအမဲလိုက်ခြင်း. သငျသညျချောကလက်ယုန်နှင့်အတူစျေးဆိုင်များနှင့် Bakeries မြင်ရပါလိမ့်မည်, ခေါင်းလောင်းထိုး, နှင့်နွေဦး၏အရိပ်လက္ခဏာ.
ပြင်သစ်မှာလည်းချောကလက်ကြက်ဥကိုခစျြ, သားသမီးရဲ့အီစတာကြက်ဥ Hunt များအတွက်ကျယ်ပြန့်သူတို့ကိုသုံးပြီး. ပြင်သစ်စတဲ့ဆင်ခြေလျှောကိုလှိမ့်ကုန်ကြမ်းကြက်ဥကိုဆင်းပါဝငျကွောငျးကြက်ဥ-လှိမ့်ယှဉ်ပြိုင်ကြ. လေထုထဲတွင်လတ်ဆတ်တဲ့ကြက်ဥ tossing ကပါဝငျတဲ့သားသမီးရဲ့ဂိမ်းလည်းရှိပါတယ်. ကြက်ဥအခြားကလေးအဖို့သူတို့ရဲ့သကြားလုံးအချို့အားငါပေးမည်သူအရှုံးသမားဆုံးဖြတ်ချိုးဖျက်ဖို့ပထမဦးဆုံး.
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အီစတာအစဉ်အလာအတွက် ပြင်သစ် အဆိုပါ cloches volantes သို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ် "ပျံခေါင်းလောင်းထိုး။ " သောကြာနေ့နှင့်အီစတာတနင်္ဂနွေနံနက်အကြားဘယ်သူမျှမကဘုရားကျောင်းခေါင်းလောင်းလက်စွပ်. ကိုယ်ကသာကွောငျးခေါင်းလောင်းလက်စွပ်အီစတာတနင်္ဂနွေဘုရားကျောင်းဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက်ဖြစ်ပါသည်, ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကျင်းပ. ပြင်သစ်ကိုလည်းယင်း၏များအတွက်လူသိများသည် ကားစင်တင်များမှာပြန်လည်သရုပ်ဖော်ပုံများ.
အတွက်အီစတာ အီတလီ , La Pasqua အဖြစ်အီတလီအားဖြင့်ရည်ညွှန်း. အခြားမတူဘဲ ဥရောပနိုင်ငံများတွင်, သငျသညျအီတလီမှာရှိတဲ့အီစတာယုန်သို့မဟုတ်အီစတာကြက်ဥ Hunt ကြည့်ရှုမည်မဟုတ်. ဤသည်ရွှင်လန်းသောအခမ်းအနားအားလုံးချစ်ရာသခင်သည်အစဉ်အလာအကြောင်း.
ဘာသာရေးစီတန်းလှအတွက်ကျင်းပကြသည် အီတလီမြို့ကြီးများ နှင့်အီစတာမတိုင်မီသောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့မြို့ရွာ. အီစတာတနင်္ဂနွေတွင်, အဆိုပါပွဲတော်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှအစားအစာမျှော်လင့်ထား. ပွဲတော်များတွင် artichokes နှင့် Angelino (သို့မဟုတ်) လှိမ့်ထားသောကလေးငယ်သိုးမွှေးပါ ၀ င်သည်။. လူတွေကလည်းလက်ဆောင်များအဖြစ်ချိုးငှက်-shaped သို့မဟုတ်ပန်းဦးရစ်သရဖူကို-shaped မုန့်ပေး.
ရောမမွို့ရှိ, တစ်နိုးနိုးကြားကြားစိန့်မှာဖြစ်ပျက်နေသည်. သန့်ရှင်းသောဘုရားစနေနေ့ကပေတရု၏ Basilica. ဒါဟာမှာစတင်သည်9ကအီစတာနံနက်ရဲ့ start အတွက်ဆောင်တတ်၏အဖြစ်ညနေများနှင့်သန်းခေါင်တိုင်အောင်အပေါ်သွားသည်. အီစတာတနင်္ဂနွေတွင်, အများဆုံးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်မုတ်ပေါ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပို့ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့်အတူစတင်.
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့်ဗာတီကန်၏, ရောမမြို့ဥရောပ၌အီစတာပွဲတော်တစ်ခုလိုရာခရီးဖြစ်ပါသည်. လူတွေကနေ့ပှဲတှငျပါဝငျနှင့်တက်ရောက်ရန်လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ကလာ ဗာတီကန်အုန်းတနင်္ဂနွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်. ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်သောကြောင့်, ဒါဟာတော်တော်လေးရနိုင် ပြည့်ကျပ်သော.
သငျသညျရောမမွို့ရှိအီစတာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ရောက်ရန်စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, အကောင်းဆုံးကန့် အစောပိုင်းသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်. အကောင်းဆုံးကိုနှုန်းထားများခံစားရန်ကြိုတင်သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံဘွတ်ကင်လုပ်ရန်. သောကြောင့်တူသောမြို့ကြီးများအတွက်အီစတာပွဲတော်များ၏လူကြိုက်များ၏ ရောမမြို့, ပဲရစ်, နှင့်အမ်စတာဒမ်, စီစဉ်ဖို့အစဉ်ပညာရဲ့.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/easter-festivities-europe/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / TR ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#Festivities easter europetravel longtrainjourneys အကြံပေးချက်များ trainjourney Tranride traintip ရထားခရီးသွား travelfrance travelnetherlands
ဥရောပပြီးတော့ဘယ်လိုရှိတယ် Get ရန်ခုနှစ်တွင်သမိုင်းဝင်ဟိုတယ်
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
5 ဥရောပရှိအကောင်းဆုံး Picnic Spot